Nyoka Mutambo 🥇 Pinda uye Nakidzwa kubva kuEmulator.online
Nyoka Mutambo: sei kutamba nhanho nhanho? 🙂
Kutamba backgammon online mahara, zvakapusa tevera iyi nhanho-nhanho mirairo:
Step 1 . Vhura browser yako yaunofarira uye enda kune webhusaiti yemutambo Emulator.online
Step 2 . Ukangopinda webhusaiti, mutambo unenge watotaridza pachiratidziri. Ungofanire kubhuya tamba uye iwe unogona kutanga kusarudza iyo gadziriso yaunoda zvakanyanya. Iwe unozogona kusarudza pakati peiyo yakasarudzika modhi uye chipingamupinyi modhi (ushingi) . 🙂
Step 4. Kuti ukunde mutambo unofanirwa kuparadza kuteedzana kwemabhora ane mavara nekukanda matema. Kana iwe ukaisa pamwechete matatu kana anopfuura iwo iwo iwo mavara, iwo anobviswa.
Chii chinonzi Nyoka Game? 🐍
The Nyoka Mutambo mutambo wenhare mbozha, vhidhiyo inonyaradza uye makomputa, mune iyo chinangwa chikuru kutungamira musoro wenyoka kuyambuka skrini , kuyedza kudya maapuro ayo anogoverwa zvisina kurongeka munzira yawo. Kuti usarasikirwe, unofanirwa kudzivirira kurova madziro uye muswe wenyoka.
Kureruka kwaro kunoita kuti uve mutambo wakasarudzika. Iwe unongoda kushandisa miseve pane yako keyboard kuti utungamire nyoka mukukunda.
Nhoroondo yemutambo 🤓
Nyoka yakaberekwa saBlockade muna Gumiguru 1976 . Mumutambo wepakutanga wanga uchitarisana nevamwe vaikwikwidza.
Chinangwa chaive chekuti vavengi vako vabonderane newe kana ivo pachavo pawanga uchakamira. Iwe waigona chete kutamisa 90 madhigirii mune yega kufamba uye kune izvi iwe waive neyekadiki yekuratidzira mabhatani.
Mune vhezheni inozivikanwa kwazvo yeNyoka Game, musiyano wekutarisa uye unova muvengi wedu isu pachedu, sezvo isu inogona kudhumhana nechero chikamu chedu kana tikasangwarira.
Mavhezheni eBlockade neNyoka maive akawanda. Atari yakagadzira shanduro mbiri dzeiyo Atari 2600, Dominos uye Surround . Kune chikamu chayo, vhezheni inonzi munyurwi yakagadzirirwa kuti Commodore uye Apple II makomputa .
Uye muna 1982 mutambo wakanzi Nibbler akasunungurwa , nyeredzi nyoka mumamiriro ezvinhu anoyeuchidza iyo Pac-Man labyrinth (1980).
Musiyano, Niblue (1991) yakauya kuzotumirwa neMS-DOS seiyo QBasic sampuro chirongwa. Uye muna 1992, vhezheni inonzi Rattler mujaho yakaverengerwa neyechipiri Microsoft Entertainment Pack, muunganidzwa wemitambo, mimwe yacho yainge yakabatanidzwa mumhando dzakateedzana dzeWindows, senge Minesweeper kana FreeCell.
Neiyi resume, zvaisashamisa kuti Nokia kubheja paBlockade / Nyoka / Nibbler seiyo Default mutambo yenharembozha dzavo dzeNokia. Iwo masimba acho aive akapusa uye akapindwa muropa, zvainakidza, uye zvaidikanwa zvehunyanzvi zvaive zvakanangana.
Nyoka Game Mhando ☝️
Nyoka Game ndeyechinyakare nharembozha uye komputa mutambo wenguva yacho, saka hatifanire kushamisika kuwana akasiyana akasiyana emutambo uyu . Icho chikonzero nei ichienderera ichishandurwa isimba rayo rekurwisa uye kupfava kana ichitamba, uye hapasisina zvikonzero zvekuramba uchiisanganisira mumusika.
Nezvose izvi, mutambo uyo wakagadzirwa muma 70s hausi wakakanganwika, uye isu tichaenda kungodoma mashoma mashoma eSyake Game.
Nokia Nyoka 1
Ndiyo Nyoka yepakutanga inogadziriswazve yeNokia S60. Iyi ndiyo vhezheni inotaurwa nezvayo patakataura kuti isu taitamba Nyoka Game pane mbozhanhare yedu.
Nyoka Nyoka Yekutanga . Ndiyo Nyoka inoenderana nefoni mafoni. Mune iyi vhezheni ivo vaida kuipawo iyo kutarisa kwemazambiringa iyo yaive nayo mumaseji ekutanga.
TiltSnake . Shandisa iyo accelerometer.
Mobile Nyoka. Yakare Nyoka ye iPhone uye iPod touch.
GeoSnake. Iyi vhezheni ine basa nyowani rakasiyana neizvo isu zvatinowanzoona, uye izvo ndezvekuti iwe une mitsva mabasa uchishandisa mepu dzakasiyana dzenzvimbo.
Nyoka Yekutanga. Inochengeta iyo mifananidzo yeakare nharembozha seyakavimbika sezvinobvira.
Uye kunyangwe anozivikanwa kwazvo enyaradzo, ane magirafu uye maficha asina kufananidzwa neanenge makumi mapfumbamwe, haana kukwanisa kuramba kusunungura yavo vhezheni yeNyoka Game . Ivo vese vakasanganisira chimwe chinhu chitsva mushanduro yavo nyowani, asi vachichengeta hunhu hwavo hweNyoka Game. Pakati pavo pane PSP, Play Station 3, WII, Nintendo DS uye Xbox 360.
Nyoka inochengetwa zvakanyanya nyore zvose zviri zviviri zviso uye maererano nemutambo wemutambo. Iko kutarisisa kuri penyoka iyo vatambi vanogona kutungamira mukati nzira ina: kuruboshwe, kurudyi, kumusoro uye pasi .
Iwo mapikisheni (maapuro) kuoneka zvisina kurongeka pahwindo uye inofanira kutorwa nemusoro yenyoka. Nepikisi yega yega yakadyiwa, kwete chete mamakisi emutambi anowedzera, asi zvakare hurefu hwese hwetiwe neyuniti.
Nekudaro, iyo nzvimbo pachiratidziro iri kuita diki uye diki, izvo zvakare zvinowedzera huwandu hwekunetseka zvichiramba. Mutambo unopera kana nyoka yabata kumucheto kwenzvimbo yekutamba kana muviri wako wega.
Kunge akawanda arcade Classics, Nyoka yakapihwa mukusiyana kwakasiyana seinternet flash mutambo kwemakore akati wandei. Zvichienderana nezvakasiyana, zvimwe zvipingamupinyi zvinoiswa munzira yevatambi kuwedzera huwandu hwekuoma.
Kugonesa yakakwira huwandu huwandu hwemapoinzi, mabhonasi mapoinzi zvakawedzerwa kune dzimwe shanduro.
Chinhu chinonakidza pamusoro pe mutambo ndiko kuti kushanda kwayo kuri nyore, uye zvinoita sekunge hazvina basa kuti vatitaurire chero hunyengeri kuti tirege kurovera. Pakupera kwezuva isu tine skrini rese kutenderera nekusingaperi. Asi chinhu chimwe chete ichi chinowanzoitika kwatiri, tinozviteya mukati yenyoka muviri pasina nzira yekubuda imomo.
Zvakanaka, usatarisira hunyengeri hwehupenyu husingaperi kana maitiro ekuita kuti chimedu cheNyoka yedu chinyangarike nenzira inoshamisa, kwete. Izvi ndizvo zvimwe matipi akapusa ekuchengeta mundangariro kana tichida kuti nyoka yedu ikure kwete kubatwa mukati mayo.
Pakutanga, zviri nyore kwazvo kufamba kutenderedza skrini pamwe zvisina zvazvinobatsira zigzags nekuti tine nzvimbo yakawanda, asi kunouya nguva apo izvi zvisingaite nekuda kwehukuru hweNyoka yedu.
Pano tinokurudzira kuti iwe ugare uchitanga kutendeuka nyoka kubva mukati ichienda kunze , nenzira iyi unodzivirira kusiya musoro wakabatirirwa pakati pemuviri.
Iri ndiro basa hombe reNyoka yedu, iye anofanira kudya maapuro kuti akure. Zvakanaka, heino imwe kukanganisa kwakajairika, uye ndizvozvo haufanirwe kuenda wakananga kwavari pasina kufunga mupfungwa kuraira kwekutanga. Chengetedza muviri weNyoka uri pasi pesimba nguva dzese, nekuti kana zvisiri, unozopedzisira warovana nechikamu chemuswe.
Kana zvakakodzera, siketi apuro kusvikira iwe uine chokwadi chekuti une simba pamusoro penyoka yako yese.
Waiziva mutambo uyu? Isu tinovimba kuti sezvo uine nyaya yemutambo uyu uye nzira yekutamba nayo, uchaona kuti sei fadza zvinogona kuva.
Une mutambo uyu uripo pano uye zvakare vakasununguka, saka hapana zvikonzero zvekutanga kutamba uye kushandisa maawa akanamirwa kuchiratidziri.
Yakareba rarama mitambo yemafoni!